Izifanekiso ezihamba phambili ze-Creative PowerPoint | Iforamu Yeselula
U-Eder Ferreno | | I-Microsoft PowerPoint, Ukushintshwa kwehhovisi
I-PowerPoint wuhlelo olusetshenziswa ezindaweni eziningi, kusuka ebhizinisini kuya kwezemfundo. Lapho senza isethulo sifuna ukuba nochungechunge lwezifanekiso ezisizayo kulo, ezisisiza ukuthuthukisa umyalezo ozothunyelwa. Yingakho abantu abaningi ngifuna izifanekiso ze-PowerPoint zokudala. Imiklamo yoqobo nehlukile esisiza ekwenzeni izethulo ezingcono.
Ngemuva kwalokho sikushiya ne- Izifanekiso ezihamba phambili ze-Creative PowerPoint, ukuze uzokwazi ukudala izethulo ezibukeka zithakazelisa kakhulu ngenxa yazo. Kunemiklamo eminingi etholakalayo emakethe, ngakho-ke ungahlala uthola isifanekiso esifanelana nokufunayo.
Lezi zifanekiso esikushiya ngezansi zikhululekile ngaso sonke isikhathi, ukuze ungakhokhi imali ukuyilayisha ku-PC yakho futhi ukwazi ukusebenza nabo ekwethulweni kwakho. Ukukhethwa kwamathempulethi kulezi zigaba kubanzi, kepha kukhona okuvelele ngaphezu kwalokhu maqondana nalokhu.
1 Isifanekiso se-Blue Watercolor
2 Isifanekiso esinama-light light
3 Isifanekiso esinamajika ashukumisayo
4 Isifanekiso ngephepha lokusika elinemibala ehlukahlukene
5 I-stencil enemivimbo yombala
6 Isifanekiso ngokuxhumeka kobuchwepheshe
Isifanekiso se-Blue Watercolor
Uma ufuna izifanekiso ze-PowerPoint zokudala, ngaso sonke isikhathi kuyasiza ukuphendukela kumiklamo ephefumulelwe ubuciko. Lokhu kunjalo kulesi sifanekiso sokuqala ohlwini, lapho i-watercolor eluhlaza okwesibhakabhaka idlala khona indima ehamba phambili kuwo wonke amaslayidi walesi sethulo. Idizayini enesibindi futhi ehlaba umxhwele, kepha izokusiza ukuthi unake wonke umuntu kuyo yonke le phrezentheshini, ngoba iyashintsha phakathi kwamaslayidi. Lokhu kuyinto eyenza kube mnandi kakhulu futhi kube namandla.
Ngaphezu kwalokho, imayelana isethulo esingasebenzela zonke izinhlobo zabasebenzisi. Ingasetshenziswa ekwethulweni kwezemfundo, ezinkampanini, kepha ilungele abantu abanobuciko. Kuyo sithola ama-slides angama-28 esizokwazi ukuwahlela futhi siwenze ngezifiso ngaso sonke isikhathi. Ngale ndlela sizokwazi ukusenzela leyo phrezentheshini ephelele, nokuyinto ebesiyifuna kulokhu.
Lesi sifanekiso se-watercolor eluhlaza okwesibhakabhaka ingalandwa mahhala, iyatholakala kulesi sixhumanisi. Ukube ubufuna umklamo oshaqisayo ophefumulelwe ubuciko futhi oyogcina intshisekelo yabantu ngaso sonke isikhathi, lapho-ke ngokungangabazeki kuyindlela enhle ongayibheka.
Isifanekiso esinama-light light
Ama-light light yinto ehlotshaniswa ezimweni eziningi nobuciko. Ukuba nombono omuhle noma wokuguqula okuthile kungamelwa ngemidwebo noma izithombe zama-light light, sinemishwana ngakho. Ukuthi isibani somuntu sikhanyisiwe kuyindlela yokuthi babenombono omuhle. Le yingqikithi esingayisebenzisa ekwethulweni, ngezifanekiso eziningi ze-PowerPoint zokudala ezisuselwa kule timu. Sikushiya nenye ozoyithanda nakanjani.
Lesi sethulo sinefayela le- yakha ngobukhona bama-bulb eceleni kwayo. Kuyindlela enhle kulabo abethula umqondo omusha noma umbono kuphrojekthi. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwayo kungukudala, kepha futhi kugcina ukuhleleka okuthile. Ngakho-ke, ingasetshenziswa ezimeni eziningi, kwezamabhizinisi nakwezemfundo. Kuyindlela eguquguqukayo kakhulu okufanele uyicabangele kulokhu.
Le thempulethi ye-PowerPoint itholakala mahhala, iyatholakala kulesi sixhumanisi. Uma ngabe ubukhathalela umklamo onama-light light ukukhombisa ukuthi uzokwethula umbono wenoveli noma wokuqhekeka kule sethuli, le thempulethi ngokuqinisekile iyindlela enhle ongayikhetha. Ngaphezu kwalokho, akunandaba ukuthi usebenza enkampanini noma uzonikeza le nkulumo ekilasini, izosebenza ezimweni zombili ngokuphelele.
Isifanekiso esinamajika ashukumisayo
Njengoba sishilo ekuqaleni, imiklamo eminingi kulezi zindlela zokudala ze-PowerPoint iphefumulelwe ubuciko. Idizayini ethakazelisayo, enesici sobuciko esicacile lesi sifanekiso esinamajika ashukumisayo. Idizayini enokuhamba okuningi nokuhlala kuheha kuwo wonke ama-slides, ngakho-ke kuyindlela enhle yokugcina abantu abeza kuleso sethulo benesithakazelo futhi benake ngaso sonke isikhathi.
Sithola amaslayidi angama-25 kuwo, esizokwazi ukwenza ngendlela oyithandayo. Singangeza ihluzo, sishintshe ifonti noma usayizi wefonti noma sifake izithombe noma izithombe kubo. Lokhu kuzosivumela ukuthi sakhe isethulo esiphelele kunazo zonke, sigcine leyo ndlela emangalisayo yezilayidi njengesizinda esihle nesithakazelisayo kuzo. Ngaphezu kwalokho, lawa maslayidi ayahambisana ne-PowerPoint ne-Google Slides, ngakho-ke ungasebenzisa isoftware ekulungele ngaso sonke isikhathi.
Njengoba ubona, iziveza njengomklamo wanamuhla, unesibindi futhi ugqozi olucacile kwezobuciko. Ngakho-ke ihlangabezana ngokuphelele naleso sifiso sezibonisi ze-PowerPoint zokudala. Lesi sifanekiso singaba landa mahhala kulesi sixhumanisi. Inketho enhle kulabo abafuna ukuklanywa ngombala, kepha ngubani ozokwazi ukuyisebenzisa ezimweni eziningi. Lo mklamo unokusebenziseka okukhulu okukhulu, okubalulekile ukucatshangelwa.
Isifanekiso ngephepha lokusika elinemibala ehlukahlukene
Imiklamo ephefumulelwe ngobuciko enemibala eminingi ivame kakhulu kumathempulethi wokudala we-PowerPoint. Lokhu futhi kwenzeka kulesi sifanekiso ukuthi inomklamo wokusika iphepha onemibala ehlukahlukene. Kuyisethulo esinombala nokunyakaza, ngenxa yezindlela ezahlukahlukene esizivezayo. Le nto isisiza ukuthi ngokubonakalayo sizithole siphambi kochungechunge lwamaslayidi athakazelisa kakhulu, azogcina ukuguquguquka okuhle kukho konke ukwethulwa.
Sithola isamba samaslayidi angama-25 enziwa ngezifiso. Singashintsha izici eziningi kuyo, njengemibala noma ifonti. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi sengeze izithombe, izithonjana noma ihluzo. Kungenzeka nokushintsha ifomethi yabo, ukuze sibe nesethulo esivumelana nalokho esikudingayo. Ukukwazi ukwenza ngezifiso zonke lezi zinkambu kuyayisiza ukuthi isetshenziswe endaweni yebhizinisi, kepha futhi nasezindaweni zokudala noma kwezemfundo.
Isifanekiso esinalo mklamo wamaphepha wokusika omibalabala ingalandwa mahhala, iyatholakala kulesi sixhumanisi. Idizayini ekhangayo, ezonikela kulowo mlayezo wokudala ofuna ukuwudlulisa kwisethulo sakho. Njengasesimweni esedlule, lesi sifanekiso siyahambisana ne-PowerPoint ne-Google Slides. Ungayisebenzisa futhi uyifinyelele ngokwezifiso zakho kuzo zombili izinhlelo kwi-PC yakho.
I-stencil enemivimbo yombala
Siyaqhubeka ngezifanekiso ze-PowerPoint zokudala ezinezici zobuciko. Lesi sifanekiso sisishiya sinamabhulashi ombala, afaka into ethakazelisayo kwisilayidi ngasinye, kanye nokuba yindlela elula yokwengeza umbala kulowo nalowo kubo. Okuhle kunakho konke, umbala ungashintshwa, ukuze umsebenzisi ngamunye akwazi ukuzivumelanisa nalesi sifanekiso ngendlela ayithandayo. Ngale ndlela, kuzokwazi ukuthi wenze isethulo esidala umthelela omkhulu wokubonga ngokusebenzisa kwakho umbala.
Lesi sifanekiso sihambisana ne-Google Amaslayidi (Izethulo ze-Google ziyatholakala ku-Google Drayivu) nange-PowerPoint. Ungayihlela kuzinhlelo zombili ngaphandle kwenkinga. Ngaphezu kwalokho, wonke amaslayidi ayo enziwa ngendlela oyifisayo, ukuze ukwazi ukwengeza izinto ezifana nezithombe, izithonjana noma ihluzo, kanye nokushintsha imibala noma ifonti ekuzo. Kunezinhlobo ezingama-25 zama-slide design noma izinhlobo ezikhona kulesi sifanekiso.
Njengazo zonke izifanekiso zokudala ze-PowerPoint kulolu hlu, lesi sifanekiso esinemivimbo enemibala ingalandwa mahhala ku-PC yethu, iyatholakala kulesi sixhumanisi. Enye ithempulethi enhle ephefumulelwe ngobuciko, isinika izinketho eziningi zokwenza ngokwezifiso. Ngenxa yalokhu, noma ngubani uzokwazi ukuyisebenzisa endaweni yakhe futhi ngale ndlela enze isethulo esibukeka sithakazelisa kakhulu.
Isifanekiso ngokuxhumeka kobuchwepheshe
Okwakamuva kwalezi zifanekiso ze-PowerPoint zokudala ingenye ephefumulelwe ubuchwepheshe, ngenxa yokwakheka kwayo ngokuxhumeka. Kungumklamo ongaba nentshisekelo enkulu lapho kufanele senze isethulo ngezihloko ezinjenge-Intanethi, isikhala, i-blockchain noma ubuchwepheshe ngokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, isebenzisa imibala eminingana, ngakho-ke igcina ukwakheka okuthokozisayo nokukhangayo ngaso sonke isikhathi kulabo abeza kule nkulumo.
Kunengqikithi yamaslayidi noma izakhiwo ezi-25 ezihlukene ngentando yakho kulesi sethulo. Njengezifanekiso ezedlule, iyahambisana ne-PowerPoint ne-Google Slides, ukuze sizosebenzisa uhlelo oluhle kakhulu kithina lapho siluhlela bese ngaleyo ndlela sidalela isethulo esifanele. Ungashintsha imibala kuyo yonke, futhi engeza ihluzo, izithombe, izithonjana noma wenze ngokwezifiso ifonti ofuna ukuyisebenzisa.
Lesi sifanekiso esinalo mklamo ophefumulelwe ubuchwepheshe singalandwa mahhala kwi-PC yakho, iyatholakala kulesi sixhumanisi. Isifanekiso esihle uma unesethulo esinezihloko ezihlobene nobuchwepheshe noma uma kumane kungumklamo onentshisekelo kuwe. Uzokwazi ukuyenza ngendlela oyifisayo ngendlela oyithandayo ukudala amaslayidi afanele esethulo sakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Iforamu Yeselula » Ukushintshwa kwehhovisi » I-Microsoft PowerPoint » Izifanekiso ezihamba phambili ze-Creative PowerPoint
Imidlalo engama-20 emahhala yama-Mac
I-Signal vs Telegram: uyini umehluko?